Carsdb wallet ဆိုတာဘာလဲ..?
CarsDB တွင် မော်တော်ယာဉ်ရောင်းသည့်အခါ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို premium car (သို့မဟုတ်) top spot အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည့်အပြင် wallet ထဲတွင်ရှိသည့် credit တန်ဖိုးနှင့်အညီ bump စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်မည့် CarsDB ပိုက်ဆံအိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ CarsDB Wallet feature ဝန်ဆောင်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ CarsDB customer များအနေဖြင့် CarsDB ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဘဏ်မှတဆင့် ငွေခဏခဏလွှဲပေးရခြင်း ကိစ္စရပ်များမှ ကင်းဝေးစေရန်နှင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ကားရောင်းချင်သူများအနေဖြင့်လည်း အင်တာနက်ရရှိနိုင်သည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို CarsDB တွင် မိမိတို့ ရောင်းလိုသော မော်တော်ကားများကို premium car အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ premium car အား bump ထပ်မံလုပ်ချင်၍သော်လည်းကောင်း၊ top spot အဖြစ်သို့လည်းကောင်းပြုလုပ်လိုပါက ဝန်ဆောင်မှု ပေးမည့် CarsDB ၏ မည်သည့် အရောင်းဝန်ထမ်းကိုမှ ဆက်သွယ်စရာမလို၊ ဘဏ်သို့ အကြိမ်ကြိမ်သွားကာ ငွေလွှဲစရာမလိုပဲ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
CarsDB Wallet ထဲတွင် credit တန်ဖိုးအဖြစ် 20,000 Ks | 50,000 Ks | 70,000 Ks | 100,000 Ks| 200,000 Ks ဟူ၍ တန်ဖိုးအသီးသီးဖြင့် သတ်မှတ် ထားရှိပါသည်။ customer များက မိမိဖြည့်ချင်သည့် တန်ဖိုး တစ်စုံတစ်ခုကို ရွေးချယ်ကာ wallet ထဲသို့ ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ CarsDB မှလည်း လူကြီးမင်းတို့ ဖြည့်ထားသည့် တန်ဖိုးအသီးသီးအလိုက် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း အပိုလက်ဆောင်ကို Credit ထဲသို့ ဖြည့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ credit တန်ဖိုးအသီးသီးလိုက် သတ်မှတ် ကာလတွေရှိပြီး wallet ထဲသို့ မြန်မာငွေ ၂ဝဝဝဝ ကျပ်ဖိုး ဖြည့်ထားပါက CarsDB မှ ပေးအပ်သော အပိုလက်ဆောင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း (၂ဝဝဝ ကျပ်) ကိုပေါင်းထည့်ကာ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ၂၂ဝဝဝ ကျပ်ကို ရက် ၃ဝ အတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ၅ဝဝဝဝ ဖိုး နှင့် ကျပ် ၇ဝဝဝဝ ဖိုးတို့ကို အပိုလက်ဆောင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူ သတ်မှတ်ကာလ ရက် ၆ဝ အတွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ ကျပ် ၁ဝဝ,ဝဝဝ ဖိုးနှင့် ၂ဝဝ,ဝဝဝ ဖိုးတို့ကို အပိုလက်ဆောင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူ သတ်မှာကာလ ရက် ၉ဝ အတွင်းတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ wallet ထဲမှ credit တန်ဖိုးလျော့နည်းနေပါက သတ်မှတ်ကာလ မကုန်ဆုံးသရွေ့ ထပ်မံဖြည့်တင်းသွားနိုင်ပါသည်။
ဒါဆို ဘယ်လိုစတင် အသုံးပြုကြမှာလဲ..?
Carsdb wallet ကိုအသုံးပြုဖို့ပထမဆုံး carsdb ရဲ့ ပင်မစာမျက်နှာ ကိုဝင်ရောက်ပြီး Login ဝင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ...
Login လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် My Wallet ကို စတွေ့ပါပြီ။ ဒါဆို My Wallet ထဲကို ဝင်လိုက်ပါတော့....
My Wallet ထဲကိုရောက်ရှိပြီဆိုရင် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနိုင်ရန် Top Up ပြုလုပ်ရပါမယ်...
ထို့နောက် မိမိ နှစ်သက်ရာ ငွေပမာဏ ကို ရွေးချယ်ပြီး Top up ပြုလုပ်ရပါမယ်.....
ပြီးသွားရင် Payment အတွက် ဘယ် Service အသုံးပြုကြမလဲ..? Cash, Bank, 123, Reddot..?
Payment အတွက် ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Carsdb Wallet ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ပါပြီ..